Orinasa fanaovana fanatanjahan-tena ho an'ny vehivavy - Mpanamboatra akanjo ara-panatanjahantena China, mpamatsy
Akanjo fanatanjahan-tena ataon'ny vehivavy
Vest Type Light Mesh Panel ， Tsara - Toning Back Version, Stretch tsy misy teritery azo velomina amin'ny fampihetseham-batana, tsy mahasosotra, famoizam-po mampihetsi-po, fampihetseham-batana tsy misy faneriterena hanala ireo fehikibo soroka, hampihena ny fihenan'ny hozatra, ny loko marobe, miaraka amin'ny effets Visual Dynamic Stereo, tsara tarehy tsy misy lasa tsy
Akanjo vita amin'ny fanatanjahan-tena vita amin'ny pirinty mainty vita amin'ny vehivavy
Misafidiana lamba vita amin'ny elastika avo, mamolavola fonosana tsara, apetraho amin'ny sainao ny fahatsapana ny hoditra fa ilay lamba dia nanaiky volamena mamirapiratra sy teboka miloko fanonta teboka henjana sy malefaka, ahazoana aina mankafy optimum, toy ny hoditra faharoa manavanana ny lamosina
Vehivavy Zipper Sports Bra
Akanjo malefaka sy mateza matevina tsy mahataitra, Akaiky ny hoditra, fanohanana mafy tsy azo tohina, mahazo ronono mpanampy, manamafy ny endrika tratra, mampihena ny marika henjana.
Akanjo fanatanjahantena azo ovaina ho an'ny vehivavy
Elastika akaiky akaiky indrindra mifantina lamba vita amin'ny elastika avo lenta, famonosana tsara, apetraho amin'ny saina tsy miangatra ny hoditra ary milamina, mahazo aina tsara, toy ny hoditra faharoa.
Fanatanjahan-tena ara-panatanjahantena indroa an'ny vehivavy
Ny fampiasana ny fitaovana maina miaraka amin'ny kaoka, ny fanosorana ny hamandoana ary ny fanesorana ny hatsembohana dia manatsara ny fahatsapana amin'ny antsipirihany amin'ny endrika famolavolana endrika roa izay manome endrika bebe kokoa ho an'ny fitantanana, manatsara ny endrika iray miaraka amin'ny takelaka roa manafina nofo manify, manao veloma ny fitafiana sarotra.
Andramo ny fomba tsy mitovy, loko miloko miaraka amina endrika lamina miverina mamorona zavatra tsara tarehy. Fanamboarana metika manokana fanamboarana metimety fanjairana fanjairana fanjairana, malefaka sy fanatanjahan-tena, tsy misy fiheverana ny vatan'ny vahiny.
Ity T-Shirt ity dia manana endrika volom-borona somary fisaka miaraka amina endriny misaraka sy lava ramanavy, izay ahazoana aina kokoa ny mitafy sy mety amin'ny fanatanjahan-tena rehetra. Ny vatana dia vita amin'ny lamba slub, feno fanavaozana.
Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Fanodinana santionany sy famokarana, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Lamba firakotra roa sosona,